E-azụmahịa saịtị na-achịkwa online ahịa | ECommerce ozi ọma
E-azụmahịa saịtị ndị na-achịkwa ahịa n'ịntanetị
Site na ọganihu a na ụwa nke ịntanetị, e mepụtara saịtị dị iche iche nke na-achịkwa ahịa n'ịntanetị, saịtị ndị a na-ere ihe karịrị 10,000 ihe kwa ụbọchị, na-eme ka ha bụrụ nnukwu ụlọ ọrụ na ụwa n'ịntanetị, na-eti ahịa ahịa ọdịnala ha nwere ọnụahịa ire ere dị nnọọ ala karịa ndị a. Ọzọ, anyị ga-agwa gị ihe saịtị ndị a ma ama na ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Ikekwe saịtị kacha mara amara mgbe ọ bịara n'ịzụ na ire, ụlọ ọrụ a hiwere na 1995 wee nwee nnukwu ọganiihu na site na 2002 ruo 2015 ha ghọrọ ndị nwe ụlọ ọrụ sistemụ ịkwụ ụgwọ kachasị ukwuu na United States, Paypal. Ọ bụghị naanị na Ebay na-enye ebe ị nwere ike ịzụta ma ree ngwaahịa na ngwaahịa, ọ na-enye gị nhọrọ nke inwe ike ịgbazite ngwaahịa gị, ebe ndị ọrụ ndị ọzọ na-enye ego dị iche iche, na nke onye ọrụ nwere onyinye kachasị elu ga-ewere ngwaahịa n'ime oge ụfọdụ.
Saịtị ahụ nwere ọnụ ọgụgụ kachasị ọnụ ahịa n'ụwa, nwere ọtụtụ ahịa dị nso na nde 50,000, saịtị a nwere ebe mbụ na saịtị E-azụmahịa na ụwa. E hiwere Amazon na July 6, 1994 n'obodo Seattle, Washington, United States. Na ọtụtụ ndị ọrụ 150,000 fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ azụmaahịa na azụmaahịa kachasị mkpa n'ụwa.
Ntọala na 1999, ọ bụ saịtị kachasị n'ịntanetị na ịntanetị banyere diamonds na ọla, saịtị a n'ịntanetị na-asọmpi na ụlọ ahịa ọla ọdịnala dịka Tiffany & Co., ma na-asọ mpi megide ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị ka Belgium Diamonds na Ringsberry .com. Ọ nwere isi mmalite nke ego $ 473 nde ma nwee ndị ọrụ nke ndị ọrụ 300.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » E-azụmahịa saịtị ndị na-achịkwa ahịa n'ịntanetị
Ndụmọdụ iji kwado nchekwa gị na saịtị azụmahịa E-commerce